“4×4 ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလယ်ထွန်စက်ဝယ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလယ်ထွန်စက် yanmar ဂျွန်မင် d140 ကိုဝယ် _အသုံးလယ်ထွန်စက်ဆရာယောဟနျသမင်” – Tractor Loader
Posted on October 14, 2018 by Maribel Hernandez
“4×4 ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလယ်ထွန်စက်ဝယ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလယ်ထွန်စက် yanmar ဂျွန်မင် d140 ကိုဝယ် _အသုံးလယ်ထွန်စက်ဆရာယောဟနျသမင်”
တိုင်ဝမ် နှင့် တိဘက် လွတ်လပ်ရေး၊ Falun Gong (ဖာလန်ဂွန်)၊ Dalai Lama (ဒလိုင်လားမား) ၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တီယန်မန် ရင်ပြင် ဆန္ဒပြပွဲများ နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း များ၊ အာဏာရ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံရေးပါတီများ ၊ သို့မဟုတ် ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတို့ ဖြစ်သည်။ VoIP အသွားအလာကို ၎င်းတို့ နိုင်ငံ၏ အတွင်း နှင့် အပြင်တွင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ စကိုက် ရှိ အသံ အသွားအလာကို ထိခိုက်ခြင်း မ ရှိသော်လည်း စာသား မက်ဆေ့(ခ်ျ)များမှာ DPI ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဆဲဆိုသည့် စကားလုံးများ ကဲ့သို့ အပြော မခံသော အရာများ ပါဝင်သည့် မက်ဆေ့(ခ်ျ)များကို တကယ့်ကို ပေးပို့ခြင်းမရှိ ဘဲ၊ စကားပြောဆိုခြင်းရှိ ပါဝင်သူတိုင်းကို အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်းလည်းမရှိပါ။ Youtube.com ၊ ဓာတ်ပုံ နှင့် ဘလော့(ဂ်) ဆိုဒ်များစွာကဲ့သို့သော ရုပ်မြင်နိုင်သည့် မီဒီယာ ဆိုဒ် များကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်တောင်ဘက် ကမ်းလွန်ရှိ လုပ်ကွက် A6 ရှိ တွင်း တတွင်းတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အကြွင်းအကျန်မျှသာ တွေ့ရှိရပြီး စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် AD7 တွင် ရှာဖွေမှု ၃ ခု အရ ဓာတုပစ္စည်း စိမ့်ဝင်နေသော သဲများကို တွေ့ရှိသည် ဟု ဆိုသည်။
တရား မဝင္သစ္ အလြန္ အကၽြံ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္မႈ ေတြဟာ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီး မႈကို ျဖစ္ေစတဲ႔ အေၾကာင္း ေတြထဲ မွာ အဓိက အခန္း က႑က ပါဝင္ေန တယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က ေျပာလိုက္ ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ဒီကေန႔ျပဳလုပ္တဲ့”…
အဆိုပါစုပေါင်းသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှတ်(၁)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးလှိုင်၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ချိုဦးတို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျောက်မဲမြို့ရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှ တပ်မတော်သားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၀င်များ၊ အမှတ်(၁၂၀)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့၀င်များ၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ၀န်ထမ်းများ၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ သန္တေတပ်ဖွဲ့၀င်များ၊အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၀င်များ၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့၀င်များ၊ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ၊ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများ စုစုပေါင်းအင်အား(၅၀၀)ကျော်မှ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် မြို့သာယာလှပစေရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆေးရုံ၀င်းအတွင်းရှိ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများ၊ လျှပ်စစ်မီးကြိုးနှင့်မလွတ်သော သစ်ပင်အကိုင်းအခက်များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး၊ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ရေမြောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စုပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ tipper ကိုယ်ခန္ဓာ၏စွမ်းဆောင်ရည်အမြတ်အစွန်းတစ်ခုအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ် KAMAZ-45143။ 5258h2320 မီလီမီတာ – ထို tipper ခန္ဓာကိုယ် KamAz-45143 ၏စုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ် 12 ကုဗမီတာ, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြည်တွင်းရေးအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်း tilt ထောင့်ပစ်သိမ်းရန် KAMAZ-45143 50 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်စွမ်းရည် KAMAZ-45143 – အမျိုးအစားသို့ကွဲပြားခြင်း၏အဓိက parameters တွေကိုတဦး။ Tipper 45143 19650 ကီလိုဂရမ်ဖို့ထရပ်ကား၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်အတူ 10 ဦးအထိတန်ချိန်ဝန်သယ်ပေးနိုင်သည်။
channel ကိုခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ် submersible ရောနှောနှင့် centrifugal စုပ်စက်ထားကြ၏။ အဆိုပါရောနှောတစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့ခြေးတစ်ရောစပ်အရည်အသွေးကိုထောက်ပံ့ပေးသဖြင့်, ရုပ်သံလိုင်း၏အောက်ဆုံးပေါ်သို့လျှော့ချသော centrifugal စုပ်စက်, ခဲနှင့် percolation မှခံနိုင်ရည်တစ်ဦးကိုတံဆိပ်ခတ်ပလပ်စတစ်ပြွန်တစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ, ထုတ်လွှင်။ တစ်ဦးသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ပါဝင်သောမြေအောက်ပိုက်လိုင်း။
Software ရွာဖို႔အတြက္က Torrent Sites ေတြကိုအသံုးျပဳရတာ ပိုၿပီး အဆင္အေျပဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုပါ။ ဘယ္လိုရွာၾကမလဲ ??? ပထမဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ႔ ရက္စြဲကို အရင္ဆံုးၾကည္႔လိုက္ပါ။ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ Software ေတြက ၄ ႏွစ္ ၅ ႏွစ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ ။ ဒါဆိုရင္ေတာ႔ Download လုပ္ဖို႔…
က်ြန္မတို့ဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ့စကားေျပာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့စကားတစ္ခြန္းခ်င္းစီကို သူမ်ားစိတ္ဝင္တစားအရွိန္တက္လာေအာင္ ဆဲြေခၚဖို့ထက္ ရုိးရွင္းတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ့ပဲအဆံုးသတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ရလဒ္အေနနဲ့ကေတာ့ နားေထာင္သူေရာေျပာသူအတြက္ေရာ ပ်င္းစရာေကာင္းလာတဲ့အျပင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမလာနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ဆိုေတာ့ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သင့္ရဲ့စကားအေျပာအဆိုပံုစံေၾကာင့္ အခုမွဆံုဖူးစကားေျပာဖူးသည့္တိုင္ ရွည္ၾကာစြာသတိတရစဲြျမဲေနေစမယ့္ စကားေျပာနည္းအခ်ိဳ့ကို မ်ွေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ။
ပြင်ပမိလ္လာတပ်ဆင်ခြင်းအတိမ်အနက်ကို (: “” အသေးစိတ်) ကဆုံးဖြတ်သည်မြေဆီလွှာကိုခဲ၏အဆငျ့, အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ရဆေိုးပိုက် အဆိုပါခေါင်းလောင်းကိုရေလက်ရှိဆန့်ကျင်သွားထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် stacked နေကြသည်။ သူတို့ကကုမ္ပဏီတစ်ခုကမြေပြင်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုတင်သော 10 စင်တီမီတာရိတ်သိမ်းသဲခေါငျးအုံးပေါ်ချထားပါသည်။
ဆိုတော့ အထက်ဖော်ပြပါစကားပြောပုံစံလေးတွေဟာ စကားဝိုင်းတိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုမသင့်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒီအသုံးအနှုန်း၊အပြောအဆိုတွေဟာ သင့်ကိုတပါးသူနဲ့ကွဲထွက်စေနေတာကြောင့် သင့်ကြောင့် သူတစ်ပါးပျော်ရသလို သင်ပါတဲ့စကားဝိုင်းကလည်း အလိုလိုစိုပြေနေမှာပါ။သင်နဲ့ဆုံဖူးသူတွေလည်း တစ်ခါမိတ်ဖွဲ့စကားပြောဖူးရုံနဲ့မေ့ပျောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့။
ထိုးဖေါက်ခြင်းအကောင်းဆုံးရွှံ့နှင့် loam (စည်းလုံး) မြေဆီလွှာထဲတွင် (400-500 မီလီမီတာအထိ) အသေးစားနှင့်အလတ်စားအချင်း၏ပိုက်ကိုတင်သောအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကန့်သတ်ထိုးဖောက်ချင်းပြွန်မှုကြောင့်တစ်ဦးအစွန်အဖျားတပ်ဆင်ထားသည်မြေဆီလွှာခင်းကျင်းထိုးပြွန်၏ဤနည်းလမ်းနှင့်တကွ, အပေါက်ထဲကနေကိုမြေဆီလွှာကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ, အားဖြင့်ဖောကျဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဆက်သွယ်မှု၌၎င်း, ပေါက်ပြွန်များ၏အလျား 60-80 မီတာထက်မပိုပါဘူး။
ပြီးနောက်မွေးမြူရေးအဆောက်အဦးများ၏နယ်မြေကနေစွန့်ပစ်၏ဖယ်ရှားရေးသူတို့၏နာလန်ထူခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအပြည့်အဝနည်းပညာဆိုင်ရာဒီဇိုင်းများ၏စံချိန်စံညွှန်းများကထိန်းချုပ်ထားသည်။ Peregoudov အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဒီဇိုင်းအတွက် NTP 17-99 ကြောင်းရှင်းပြသည်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးရှုပ်ထွေးသောအဘို့အစွန့်ပစ်ရေကုသမှုအဆောက်အဦ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနေသောခေါင်းစဉ်: အပိုငျးသို့ချေး effluents ၏ခွဲခြာ;7ရက်အတွင်းချေးအမျိုးအစားအားလုံးကို၏ quarantine; (7-8 ရက်အတွင်း) သို့မဟုတ် passive တက်ကြွ hardstock နှင့်အစိုင်အခဲချေး composting (ထိုပူနွေးလအတွင်း2လနှင့်အချမ်းသောကာလ၌3လအထိ) disinfecting နှင့် dehelminthization ဘို့နည်းလမ်း; မျိုးစိတ်ပေါ် မူတည်. 8 လမှနျသိုလှောငျရေကန်အပိုင်း4မှာပိုးသန့်ဆေးအရည်ချေးအစိတ်အပိုင်း, လယ်ကွင်းအပေါ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ချေးနှင့်၎င်း၏အပိုငျးအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုခြင်း။
Previous PostPrevious “montana traktoren -kaufen John Deere lt166”
Next PostNext “mccormick tractors john deere small tractors”